တိတ်တဆိတ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ Game of Thrones မင်းသမီးလေး Sophie Turner နဲ့ ပေါ့ပ်စတား Joe Jonas - For her Myanmar
ပရိသတ်တွေအတွက် စပရိုက်စ်တဲ့လား? အသည်းတွေတော့ ကွဲကုန်ပါပြီနော်..
Game of Thrones မင်းသမီးလေး Sophie Turner နဲ့ Jonas Brothers အဖွဲ့ဝင် Joe Jonas တို့ လူမသိသူမသိ တိတ်တိတ်လေးလက်ထပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းက ပရိသတ်တော်တော်များများကို အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်သွားစေပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာ အတော်ကြာနေပြီး စေ့စပ်ထားတယ်လို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထဲကကြေညာထားပေမဲ့ ဒီလိုရုတ်တရက်လက်ထပ်သွားမယ်လို့တော့ ဘယ်သူမှကို မထင်ထားတာပါ။ မင်္ဂလာပွဲကို မေလ(၁)ရက်နေ့ညက Las Vegas မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တာပါ။
ပွဲတက်ရောက်သူ ဧည့်ပရိသတ်တွေထဲမှာ Joe ရဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nick နဲ့ Kevin လည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ မကြာသေးခင်ကမှ Nick နဲ့ လက်ထပ်လိုက်တဲ့ Priyanka Chopra ကတော့ သတို့သမီးအရံအဖြစ် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ နီးစပ်ရာအသိုင်းအဝိုင်းတွေ ရှေ့မှောက်မှာ ကတိသစ္စာတိုင်တည်ခဲ့ကြပြီး မီဒီယာတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို လုံးဝအသိမပေးခဲ့ပါဘူး။
Related article >>> Park Bo Gum နဲ့ Gong Yoo တို့ကို အတူယှဉ်တွဲတွေ့ရမယ့် ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် “Seo Bok”
အစောပိုင်းရက်တွေတုန်းတောင်မှ နှစ်ယောက်သား ဇွန်လမှာ လက်ထပ်တော့မယ်လို့ သတင်းထွက်ထားရာကနေ ဗြုန်းစားကြီး ပရိသတ်ကို စပရိုက်တိုက်သွားတဲ့ ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲက ကြိုတင်စီစဉ်ထားတာလား ရုတ်တရက်လားဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ကဲ … Stella ကတော့ Sophie Turner လေးပါသွားလို့ အသည်းတွေကွဲကြေနေပြီ။ ယောင်းတို့ကော ဒီကြင်စဦးစုံတွဲလေးကို သဘောတူကြလား ?
References : BBC , Buzzfeed , Mirror
ပရိသတျတှအေတှကျ စပရိုကျဈတဲ့လား? အသညျးတှတေော့ ကှဲကုနျပါပွီနျော..
Game of Thrones မငျးသမီးလေး Sophie Turner နဲ့ Jonas Brothers အဖှဲ့ဝငျ Joe Jonas တို့ လူမသိသူမသိ တိတျတိတျလေးလကျထပျလိုကျတဲ့အကွောငျးက ပရိသတျတျောတျောမြားမြားကို အုတျအျောသောငျးနငျးဖွဈသှားစပေါတယျ။
သူတို့နှဈယောကျဟာ ခဈြသူတှဖွေဈနတော အတျောကွာနပွေီး စစေ့ပျထားတယျလို့ ၂၀၁၇ ခုနှဈထဲကကွညောထားပမေဲ့ ဒီလိုရုတျတရကျလကျထပျသှားမယျလို့တော့ ဘယျသူမှကို မထငျထားတာပါ။ မင်ျဂလာပှဲကို မလေ(၁)ရကျနညေ့က Las Vegas မွို့မှာ ကငျြးပခဲ့တာပါ။
ပှဲတကျရောကျသူ ဧညျ့ပရိသတျတှထေဲမှာ Joe ရဲ့ ညီအဈကိုနှဈယောကျဖွဈတဲ့ Nick နဲ့ Kevin လညျး အပါအဝငျပါပဲ။ မကွာသေးခငျကမှ Nick နဲ့ လကျထပျလိုကျတဲ့ Priyanka Chopra ကတော့ သတို့သမီးအရံအဖွဈ ကူညီပေးခဲ့ပါတယျတဲ့။ နီးစပျရာအသိုငျးအဝိုငျးတှေ ရှမှေ့ောကျမှာ ကတိသစ်စာတိုငျတညျခဲ့ကွပွီး မီဒီယာတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို လုံးဝအသိမပေးခဲ့ပါဘူး။
Related article >>> Park Bo Gum နဲ့ Gong Yoo တို့ကို အတူယှဉျတှဲတှရေ့မယျ့ ကိုရီးယား ရုပျရှငျ “Seo Bok”
အစောပိုငျးရကျတှတေုနျးတောငျမှ နှဈယောကျသား ဇှနျလမှာ လကျထပျတော့မယျလို့ သတငျးထှကျထားရာကနေ ဗွုနျးစားကွီး ပရိသတျကို စပရိုကျတိုကျသှားတဲ့ ဒီနှဈယောကျရဲ့ လကျထပျပှဲက ကွိုတငျစီစဉျထားတာလား ရုတျတရကျလားဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ကဲ … Stella ကတော့ Sophie Turner လေးပါသှားလို့ အသညျးတှကှေဲကွနေပွေီ။ ယောငျးတို့ကော ဒီကွငျစဦးစုံတှဲလေးကို သဘောတူကွလား ?
Tags: breaking news, celebrity, game of thrones, joe jonas, marriage, News, sophie turner